Kpido: akara ekwentị | Martech Zone
Kpido: akara ekwentị
Mpaghara SEO: Gini bu ihe ogugu? Owuwu Okwu?
Ihe ntinye bu aha dijitalụ nke njirimara puru iche nke ahia gi na intaneti. Ọ nwere ike ịgụnye aha aha dị iche ma ọ bụ akara ngwaahịa, adreesị anụ ahụ, ma ọ bụ akara ekwentị. Ọ bụghị njikọ.
Ihe mgbagwoju anya nke njirimara na njikwa data ndi ahia
Tọzdee, Ọktoba 18, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Emeka Nwoke
Nsogbu Onye Azụmaahịa Ndị Ahịa Na akụkọ ọdịnala ndị Hindu, Ravana, onye ọka mmụta ukwu, na eze ndị mmụọ ọjọọ, nwere isi iri, na-egosipụta ike ya na ihe ọmụma ya dị iche iche. Isi enweghị ike ibibi ya na ikike ịghaghachi. Na agha ha, Rama, chi agha, ga - eserịrị n'okpuru isi Ravana wee tụọrọ akụ na obi dị naanị ya ka ọ gbuo ya maka ezi ihe. N'oge a, onye na-azụ ahịa dịtụ ka Ravana, ọ bụghị na usoro nke ya
Enweghị oku Ndepụta, Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Gị Na-arịwanye Elu
Saturday, October 18, 2014 Tọzdee, Nọvemba 5, 2015 Douglas Karr
Anyị nwere ndị ahịa ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ngalaba n'ime ahịa… mmekọrịta ọha na eze, mgbasa ozi ọdịnala, njikarịcha ọchụchọ, ahịa mkpanaka, mmepe ọdịnaya na ndị ọzọ. N'ime afọ gara aga, anyị maara na okporo ụzọ na ntụgharị maka SEO na ọdịnaya nwere okpukpu abụọ n'ihi na ejikọtara nchịkọta nke ọma na saịtị ahụ. Enwere nnukwu nsogbu, n'agbanyeghị. Ngalaba ahia ha na-eji otu nọmba ekwentị niile n’ime mkpọsa niile agbanyeghị usoro. Ihe si na ya pụta bụ na onye ọ bụla kpọrọ oku